shwezinu: ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း အပိုင်း (၁)
ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း အပိုင်း (၁)
အတိတ်ဆိုတာ တကယ်ကတော့ စိတ်အာရုံနဲ့ အသည်းနှလုံးမှာ စွဲထင်ကျန်ခဲ့ရစ်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ပုံရိပ် အစိတ်အပိုင်း ကလေးတွေကို မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
လူတိုင်း လူတိုင်း မှာ စွဲလမ်းမက်မောစိတ်နဲ့ တသသ ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ လှပတဲ့ အတိတ်ကလေး တွေ ရှိသလို အိပ်မက်ဆိုး လို ပြန်ပြီးတွေးချင်စရာ မကောင်းတဲ့ ချောက်ချားစရာအတိတ်မျိုးတွေ လည်းရှိကြတာပါပဲ။
လူ့ဘ၀ ဆိုတာ နေရတဲ့ နှစ်ကာလတွေ ကြာလာလေ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတဲ့ အတိတ်ပုံရိပ် ပန်းချီ ကားတွေ အမြောက်အမြား စုမိဆောင်းမိ ဖြစ်လာလေ မဟုတ်လားနော်။ အခု ကျွန်မရဲ့ အသက်က လည်း (၇၀)ကျော်လာပြီ ဆိုတော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတိတ်လမ်း၊ အတိတ်ခရီး၊ အတိတ်နယ်မြေ ကရှည်းလျား ကျယ်ဝန်းရုံမကဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ပုံရိပ်ပန်းချီကားတွေကလည်း အမြောက်အမြား ဖြစ်လာပြီး ပြောရရင် ဧရာမ အနုပညာ ပန်းချီပြခန်းကြီးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထးသလို ခံစားမိပါတယ်။
အဲဒီ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းပိုင် အတိတ်လမ်း၊ အတိတ်နယ်မြေလေးဟာ နှစ်ကာလ ဘယ် လောက်ကြာသွားလည်း အပျက်အစီး မရှိ အစဉ်တည်မြဲလျက်ပါပဲ။ ဘ၀ပုံရိပ် ပန်းချီကားတွေက လည်း ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ပြခန်းကြီးထဲမှာ သူ့နေရာ နဲ့သူ အထားအသိုမပျက် ချိတ်ဆွဲလျက်ပဲ စိတ်ကူး ရတဲ့အခါတိုင်း အတိတ်လမ်းကို ပြန်လျှောက်ရင်း ဘ၀ပုံရိပ် ပန်းချီကားတွေ ရဲ့ ရှေ့ကို ရောက်သွား တတ်ပါတယ်။
ကြည်နူး ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ ပန်းချီကားရှေ့ ရောက်တဲ့အခါလည်း ဘ၀ရဲ့လှပခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်က လေး ပါလားဆိုပြီး ရင်မှာ နှစ်သိမ့်ပီတိတွေ စိမ့်ရ၊ မုန်တိုင်းတွေထန် လှိုင်းလုံးတွေထပြီး ကိုယ့်လှေ ကလေး မှောက်တော့ မယ့် မြင်ကွင်း တွေ့ရပြန်တော့လည်း လွတ်မြောက်အောင် အားသွန်ရုန်းကန် လှုပ်ရှားခဲ့ရ တဲ့ ပုံရိပ်ကလေးဖြစ်လို့ ရင်တွေတုန် နှလုံးခုန် ဖြစ်ရတာလည်း ရှိရဲ့ပေါ့။
ပန်းချီကားရဲ့ ပုံရိပ်တိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အမှတ်အသား သင်္ကေတတွေပဲလေ။ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေ၊ ယူကျုံးမရ ကြေကွဲရင်နာရမှုတွေ၊ ဆုံးစည်း ရခြင်း၊ ကွေကင်းရခြင်းတွေ၊ ချမ်းသာသုခ နဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းတွေ၊ မကျွမ်းကျင်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေ၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့ ခဲ့တဲ့ အမှားအယွင်းတွေနဲ့ လောကဓံတရားရဲ့ အစမ်းသပ် ခံအဖြစ် စာမေးပွဲဝင်ရင်း အမှတ်ကောင်းကောင်း နဲ့ အောင်ခဲ့တာ လည်းရှိ၊ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးခဲ့ တာလည်းရှိ။ ကျွန်မရဲ့ အတိတ်လမ်းပေါ်က ပန်းချီပြခန်းကြီး က အခါခါကြည့လေ၊ စိတ်အာရုံမှာ ရသစုံ အမျိုးမျိုး ခံစားရလေပါပဲ။
အတိတ်လမ်းကို ပြန်လျှောက်ရင်း အသိတရားတွေလည်း တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ပိုပြီးရင့်ကျက်လာ တာပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို လေးလေးနက် နက်သိထားတာ မဟုတ်တော့ ကိုယ်ခံလိုက်ရရင်ပဲ အမယ်လေးဟဲ့၊ ရက်စက်လိုက်ကြတာဆိုပြီး သူတစ်ပါးကိုသာ အပြစ်မြင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သနားနေလိုက်သေးတာနော်။ တကယ်က တော့ အားလုံးသော ဖြစ်ပျက်မှုတွေဟာ မိမိပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကံတရားလည်းပါ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အသုံး မကျမှု၊ ညံ့ဖျင်းမှု၊ ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့မှုတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းဆိုတာအခုမှ မြင်တတ်သွားတော့ အကိုသိုလ်မပွားဘဲ ခံနိုင်ရည်စွမ်းလည်း ပိုရှိလာပါတယ်။ ရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတာကလည်း အတွေ့အ ကြုံနဲ့ အချိန်ကာလသာ အကျိုးပြုနိုင်တာ မဟုတ်လားနော်။
ဘာလိုလို နဲ့ ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့ ကို ရောက်ဖို့တစ်လပဲ လိုပါတော့တယ်။ မွေးနေ့ဆိုတာ ကိုယ်တစ်ဦး တည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နှစ်သစ်လို့ ဆိုထားတာမို့ နှစ်ဟောင်းက မကောင်းတာတွေအားလုံးကို စွန့်ပစ်ပြီး နှစ်သစ် နဲ့ညီစွာ ကောင်းတာတွေ ရှာကြံဦးတည်ရမယ်လေ။ ပညာရှင် "ဆိုကရေးတီး"က ကိုယ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ခရီး ကို ပြန်ပြီး မလေ့လာ၊ မသုံးသပ်သူဟာ လူဖြစ်ရှုံးခြင်း ပဲတဲ့။
သူပြောသလို လူဖြစ်ရှုံးမခံနိုင်တာနဲ့ အတိတ်လမ်းကို ကျွန်မခဏခဏပြန်လျှောက်ရင်း သူံးသပ်မိ တယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အတိတ်လမ်းပေးမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အမုန်းတွေ၊ မကျေနပ်မှုတွေ၊ ခံရခက်ခြင်းနဲ့ တေးထားတဲ့ အတွေးတွေ၊ မာနရောက်မှုတွေ ဆိုတဲ့ စိတ်ရဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေကို လိုက်ကောက် ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ အကုန်လုံး ကျုံးပြီး ထည့်၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ တံမြက်စည်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်လည်း ကြင်လင်ရွှင်လန်းသွားတာပါပဲ။
ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့သစ်မှာ ဆက်လျှောက်ရဦးမဲ့ "အနာဂတ်"ဆိုတဲ့ မှတ်တိုင်လေးနဲ့လမ်းကို လှမ်း မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ ၀င်ရမဲ့ လမ်းထိပ်မှာ "သင် လုပ်ဆောင်ရန်"ဆိုတဲ့ ဧရာမ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကို မြင်လိုက်မိပြန်ပါရော။
"ဟောတော့....လုပ်ဆောင်ရမဲ့ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေးတွေကလည်း အများကြီးပါလား။ ငါ့မှာ နေရမဲ့ အချိန်ကလည်း ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ အဲဒါ ဒုက္ခလို့ တစ်ယောက်တည်း ညည်းညူမိရပါတော့ တယ်။"
"ပေးထားဖူး တဲ့ ကတိစကားတွေ၊ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ရမဲ့ဝတ္တရားတွေ၊ တုံ့ပြန်ရမယ့် ကျေးဇူး တရားတွေ၊ မေတ္တာအကြင်နာတွေနဲ့ လူသားချင်း ရိုင်းပင်းရမဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသိဥာဏ် တိုးတက် ရင့်ကျက်မှုအတွက် လေ့လာလိုက်စားရမယ့် ပညာဗဟုသုတတွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာမှု အတွက် စောင့်ရှောက်ရမဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ နောက်ဆုံး ဘ၀ကူး ကောင်းဖို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမဲ့ ဘာဝနာတွေ"
"အလိုလေး...ငါဘယ်လိုလုပ် အချိန်ရှာရပေါ့"လို့ စာရင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်မောရပါတော့တယ်။
"နံပါတ်တစ်၊ ပေးထားပြီးသား ကတိစကားတွေ"
ဟုတ်ပါရဲ့။ ကျွန်မမှာ ပေးထားပြီးသား ကတိစကားကြွေးတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတိပေး မိသူ ကတော့ ကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်၊ မောင်ငယ် တစ်ယောက်ကိုလည်း ချစ်ရတဲ့ စန္ဒာမဂ္ဂ ဇင်းပိုင်ရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသား ကိုဝင်းဦးပါ။
စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆောင်းပါးတွေ လစဉ်မပြတ် ရေးပေးနေချိန်မှာ ကိုဝင်းဦးက တောင်းဆိုမှု တစ်ခုပြု ပါတယ်။ ကျွန်မ ရဲ့အတိတ်လမ်း၊ အတိတ်ခရီး၊ အတိတ်နယ်မြေကို ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းချည်း ပြန်လျှောက်ရင်း ခံစားမနေပါနဲ့။ ကျွန်မကို ချစ်ကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကိုလည်း ခွဲဝေခံစားသင့်ပါတယ်။ အတူတူခေါ်သွားပြီး ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ်အကောင်းအဆိုး၊ အမှားအမှန်တွေကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခွင့် ပေးပြီး သင်ခန်းစားယူသင့်တာတွေ ယူကြပါစေပေါ့တဲ့။
စာဖတ်သူများ အပေါ် စေတနာကောင်းနဲ့ တောင်းဆိုလာတဲ့ စကားမို့ ကျွန်မကလည်းလက်ခံ သဘောတူခဲ့ ပါတယ်။ စာဖတ်သူများနဲ့ ခွဲဝေခံစားဖို့ "အတိတ်လမ်းကို ပြန်လျှောက်ခြင်းကို ရေးပေးပါမယ်လို့လည်း ကတိပြုတဲ့ စကား ဆိုခဲ့မိပါတယ်။"
ဒါပေမဲ့ ခက်တာတစ်ခုက ကျွန်မက စာရေးဆရာ မဟုတ်ဘဲ စာရေးသူသက်သက်သာ ဖြစ်နေတာ က တစ်ကြောင်း၊ ကလေးတွေ တစ်လှေကြီး မွေးထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့မိသားစုရဲ့ အမေတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာက တစ်ကြောင်း ဆိုတော့ စာရေးဖို့ အချိန်ရှာလို့ မရရင်းနဲ့ ကိုဝင်ဦးသာ ကွယ်လွန်သွား ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်လုံးမှ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
စာရေးဆရာ နဲ့ စာရေးသူကိုလည်း ခွဲခြားပြီး ရှင်းပြရပါဦးမယ်။ စာရေးဆရာဆိုတာက စာတစ်ပုဒ် ကိုဘယ်အချိန်၊ ဘယ် အခါ ဘယ်နေရာမှပဲဖြစ်ဖြစ် ချရေးနိုင်တဲ့သူကို စာရေးဆရာလို့ သတ်မှတ် ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုဝင်းဦး ဆိုရင် ဧရာမထူတဲ့ "မိန်းမလှအမုန်းဝတ္ထုရှည်ကြီးကို ကားရိုက် ရင်းတစ်ဖက်နဲ့ ရိုက်ကွင်းထဲ မှာ ရေးပေးခဲ့တာလို့ ကျွန်မစာစောင်တစ်ခုမှာ ဖတ်မိဖူးပါတယ်။"
ကျွန်မ ကတော့ တစ်သက်လုံး စာရေးဆရာဖြစ်ဖို့များတော့ ဝေးပါသေးရဲ့။ မိသားစုကများတဲ့အပြင် အပေါင်းအသင်း ကလည်း များသေးတာဆိုတော့ ကျွန်မအိမ်မှာ ဧည့်သည်ကလည်း ပြတ်ခဲပါဘိ ခြင်း။ တစ်ယောက် မဟုတ် တစ်ယောက်နဲ့ အ၀င်အထွက်တွေကလည်း ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာ။ ကျွန်မက အဲလို လူတွေအနား မှာရှိနေရင် ဘာစာမှ ရေးဖို့မထွက်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်ယောက် တည်း အေးအေးဆေးဆေး ရှိမှ စာရေးဖို့ စိတ်သွင်းလို့ရတာပါ။
အချိန်အခါတွေ၊ နေရာတွေ ရွေးပြီးမှ စာရေးနိုင်သူဆိုတော့ တစ်သက်တာ လုံး စာရေးဆရာအဖြစ် ကို ရောက်မှာမဟုတ်တာ သေချာလှပါတယ်။ ၀ါသနာပါလို့အပြင် စာရေးနေခြင်းက အမိမြေ ကို စိတ်အာရုံ နဲ့ ပြန်ပြီးအလည်ရောက်နေရသလို ခံစားရပြီး အလွမ်းပြေလို့သာ ရေးဖြစ်နေပေမဲ့ တကယ်က ကျွန်မ မှာ အချိန် ရှားပါး လွန်းတာကြောင့် ကိုယ်က ရေးချင်သလောက်စာများများ မရေး ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကိုဝင်ဦး မရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ ကျွန်မလည်း ဒီကိစ္စကို မစဉ်းစားတော့ ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ပဲ နေလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မကို တဂျီဂျီနဲ့ ရေးဖို့ တိုက်တွန်းသူ တစ်ဦးပေါ် လာပြန်ပါရော။ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်လည်းဖြစ်၊ ရေးဖော်ရေးဖက် စာပေမောင်ငယ် လည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သန်းမြင့်(ဗန်းမော်)ပါပဲ။
သူဂျီကျတာကို နားအေးအောင် "အေးပါ၊ အေးပါ၊ ရေးပါမယ်၊ လာမယ်၊ ကြာမယ်ပေါ့"လို့ ခပ်ရွှန်း ရွှန်းနဲ့ပဲ သူ့ကိုချွေးသိပ်ထားလိုက်ပြီး အစမ်းသဘောနဲ့လေး ငါးရွက်တော့ ရေးဖြစ်ပါသေးရဲ့။ နောက်တော့လည်း ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၃ခုနှစ်မှာ ကျွန်မနဲ့ သမီးလတ် ကေသီခန့် တို့ မြန်မာပြည် အလည်ပြန်သွားဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း စာတည်းချုပ် ကိုဝင်းငြိမ်း နဲ့ အတူသွားကြ လာကြရင်း စာပေအကြောင်းတွေ ပြောကြရင်း ဒီအကြောင်း လည်း ပြောဖြစ်ပြန်ပါရော။ အဲဒီတော့ ကိုဝင်းငြိမ်းက "ဒါဆို အန်တီခင်ကျွန်တော့်ကို ပေးပါ၊ ရွှေမှာ ထည့်ရအောင်" လို့ တောင်းပါတယ်။
ကိုဝင်းငြိမ်းကလည်း ကျွန်မရဲ့ ၀မ်းမနာသားလို ဖြစ်နေတာနဲ့ ဒီတစ်ခါလည်း "အေးပါ၊ အေးပါ"နဲ့ ကတိက၀တ်ပြုခဲ့တာ အခုဆိုရင် လေးနှစ်ပြည့်ဖို့ လေးလပဲလိုပါတော့တယ်။ ကိုဝင်းငြိမ်းဖုန်းဆက် လာတိုင်း အားနာစိတ်နဲ့ တောင်းပန်ရတာလည်း အခါပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီမို့ ကျွန်မအနေရခက်နေ မိပါတယ်။
"ဟော...အခုတော့ ကျွန်မလုပ်ဆောင်ရမယ့် စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေတာမို့ မဖြစ်မနေ ရေး ပါတော့မယ် ဆိုပြီး ကတိစကားကြွေးကို ဆပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကိုဝင်းဦးကို ကတိပြုထားမိတာက နေ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာမှ၊ ကိုကျော်သန်းမြင့် ကို ကတိပြုထားမိတာလည်း ခြောက်နှစ်ကျော်ကြာမှ၊ ကိုဝင်းငြိမ်းကို ကတိပေးထားတာ လည်း လေးနှစ်နီးပါးရှိမှ ကတိစကားတစ်လုံးကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ချို့ယွင်းပေါ့ဆမှုများကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဒီနေရာ ကပဲ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါရစေနော်။"
ကျွန်မကို အခုလို မြန်မာစာ ကောင်းကောင်းရေးနိုင်အောင် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သူက ကျွန်မ ရဲ့ဘိုးလေး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးအောင်ညွန့်ပါ။ ကျွန်မပုံစံကို ကြည့်ပြီး တော်တော် များများက မြန်မာစာ ရေးနိုင့်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ကြပါဘူး။ အဖေက သြစတေးလျလူမျိုး အမေက အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ကပြား ဆိုတော့ မြန်မာသွေး လေးပုံးတစ်ပုံပဲ ပါတာမို့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မြန်မာရုပ် မထွက်ရတဲ့အထဲ အနုပညာ သမားတစ်ယောက် ကို နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လည်း မရှိပြန်၊ ၀တ်တာစားတာက လည်း ခေတ်ဆန်၊ အဲဒီတော့ မြန်မာစာပေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆက်စပ်နိုင်ပါတော့မလဲ။
တစ်ခါက ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ဦးဆိက စာကိုဖတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း ရယ်ရပါသေး တယ်။ စာရေးသူ က သုသုဝဏ္ဏ၊ ဂန့်ဂေါ်မြိုင်လမ်းက ဦးသန်းထွန်းအောင် ဆိုသူပါ။ သူက ၁၉၇၀ ၀န်းကျင် စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း မှာ ရေးနေတဲ့ "ပတ္တမြားခင်"ရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို နှစ်သက်လို့အမြဲ စောင့်ပြီး ဖတ်နေသူပါတဲ့။ ၁၉၇၇ခုနောက်ပိုင်း ပတ္တမြားခင် စာပေနယ်က ပျောက်သွားလို့ဘာများ ဖြစ်လဲ တွေးဆနေမိတာ အခု စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်တွေ့ရတော့ "ပတ္တမြားခင်"ဆိုတာ "ခန့်ခန့်ကြီး"လို့ သိရတဲ့အတွက် အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် ဖြစ်သွားရပါသတဲ့။
"ခန့်ခန့်ကြီး"ကို မင်္ဂလာဆောင်တကာ၊ အလှူပွဲတကာမှာ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ အင်မတန်ခေတ်ဆန် တဲ့ ကပြားမတစ်ယောက်ပဲ။ ဒီကပြားမ ဟာ မြန်မာစကားတောင် လေးလုံး ကွဲ အောင်ပြော တတ်မယ် မထင်ဘူး လို့ အောက်မေ့မိတာ။ အခုသူ အလွန်နှစ်သက်တဲ့ စာရေးသူ ပတ္တ မြားခင် ဆိုတော့ ဘယ်လို မှ မယုံကြည်နိုင်ရအောင် ဖြစ်ရပါတယ်တဲ့လေ။
နောက်တစ်ဦး ကတော့ ကျွန်မ အမေရိကား မသွားခင် ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါ။ ကုန်သွယ်ရေးက အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးသန်းထွန်း ပါ။ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ သူတို့အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ တခြားဧည့်သည် တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပြောလက်စ စကားဝိုင်းက စာပေအကြောင်းပါ။ ပြောရင်းက စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း မှာပါတဲ့ ပတ္တမြားခင်ရဲ့ "ညူကလီးယား နဲ့ တွေ့ပါစေ"၀တ္ထုအကြောင်းဖြစ်နေပါရော။ ကျွန်မလည်း အသာလေး ငြိမ် နားထောင်နေတာပေါ့။ ဘာတွေများ ဝေဖန်မလဲ သိချင်သေးတာကိုး။
စကားပြတ်တော့ ကျွန်မရဲ့ ခင်ပွန်းက "ပတ္တမြားခင်ကို သိလား။ ဒီမှာလေ"လို့ ကျွန်မရဲ့ ပခုံးကို ပုတ်ပြတော့ အရွှန်းပြက်လုံး တစ်ခု ပြောတယ်ထင်ပြီး ၀ါးခနဲ ရယ်ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘီးလို ကျွန်မနဲ့ "ပတ္တမြားခင်" ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ တကယ်ထင်ကြတာပါ။
နောက် အတည်ပေါက် ပြောမှန်းသိမှ လုံးဝကို မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီဗိုလ်ကြီး သန်းထွန်းက ကျွန်မ စာတွေ ကို ဘယ်လောက် ဖတ်ထားမှန်း မသိပါဘူး။ ရေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မကတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူက စာပုဒ်တချို့ ကို အလွတ်ရွတ်ပြနိုင်တဲ့ထိ မှတ်မိနေသူပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါ တလေလည်း "စာအုပ်အဖုံးကို ကြည့်ပြီး အတွင်း က ရေးထားတဲ့ စာသားကို မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး"ဆိုတဲ့ စကားကမှန်သလိုလိုပါပဲလေ။
စောစောက စကားဆက်ရရင် ဘိုးလေးဦးအောင်ညွန့်က ကျွန်မကို မြေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလွန် ချစ်မြတ်နိုး ပါတယ်။ သိစေ တတ်စေချင်တဲ့ စေတနာလည်း အလွန်ရှိ၊ စည်းကမ်းလည်း အင် မတန်ရှိသူပါ။ တကယ်က ဘိုးလေး နဲ့ ကျွန်မ သွေးတစ်စက်မှ စပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘိုးလေးက မုံရွာခရိုင် ကျည်းကန်ရွာသား။ ကျွန်မကို ဆယ်တန်းတုန်း က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကျည်းကန်ရှင်ကြီးရဲ့ ဇာတိ ရွာပေါ့။ မြန်မာဆန်တာလည်း ပြောမနေနဲ့။ ဆံပင်ကို အရှည်ထားပြီး သျှောင်ထုံး တာပါ။ ပြီးမှ ပိုးပ၀ါ ကိုနှစ်စတုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ခေါင်းပေါင်းပါတယ်။ ဟိုခေတ် က မောင့်ကျက်သရေ ခေါင်းပေါင်းလို အဆင်သင့် လုပ်ပြီးသား ခေါင်းပေါင်းကလည်း ပေါ်သေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
အဲလို အလွန့်အလွန် မြန်မာဆန်တဲ့ တောက ဘိုလေးနဲ့ ဗိုလ်ကတော် ကျွန်မရဲ့ ဘွားလေး နဖူးစာ ဆုံကြတာတော့ "ရွာလည်လွန်းသော ဖူးစာ" ပဲလို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဘိုးလေးက ထက်မြက်သ လိုစာသင် စာပြလည်းတော် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသက်ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ စိန့်အင်ဒရူး ကျောင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်တာနေမှာပေါ့။ ဘိုးလေးက ကျည်းကန်ရွာကနေ မိဘညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ နဲ့ ခွဲပြီး မန္တလေး မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ လူပျိုလူရွယ်ဆိုတော့ အိမ်မှာထမင်းလခ ပေးစားပြီး အခန်း ငှားနေပါ တယ်။
ကျွန်မရဲ့ ဘွားလေးကလည်း ဗိုလ်ကတော် မုဆိုးမ။ ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်။ ကပ်ရက်အိမ်မှာ နေတဲ့ ဘိုးလေး နဲ့ အထိအတွေ့များကြပြီး တွေ့သွားကြတာ ထင်ပါရဲ့။ ဘွားလေးရဲ့အမေ ကျွန်မ တို့ရဲ့ ဘွားမေက လုံးဝ သဘောမတူ ဘူးဆိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဖျက်မရတော့လည်း လက်ခံလိုက်ရတော့တာ ပေါ့။ ဘွားလေးတို့ လက်ထပ်ပြီးတော့ ခြံ ထဲမှာပဲ နောက်ထပ် အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီး ဘွားလေးနဲ့ ဘိုးလေးတို့ တစ်အိမ်နေကြ ပါတယ်။
ဘွားလေးရဲ့ သားနဲ့သမီးကို ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘွားမေက သူ့အိမ်မှာပဲ နေစေပြီး စောင့်ရှောက်ထားပါ တယ်။ ကျွန်မ အမေ အိမ်ထောင်ကျတော့ ဘွားလေးရဲ့သမီး ခင်ခင်လှကို မာမီက အတူခေါ်သွားပြီး သားကြီး ကိုကျော်ကို ဘွားလေး တို့က ဘော်ဒါကျောင်းပို့ပြီး အပ်ထားလိုက်တယ်။ မာမီတို့က ပြင်ဦးလွင်ကနေ ရန်ကုန်ပြောင်း၊ ရန်ကုန် ကနေ နယ်တကာ ပြောင်းပြီး မန္တလေးရောက်တဲ့အချိန်ကျ မှကျွန်မကို မွေးတာပါ။
မာမီရဲ့ဘ၀ထဲ ကို ကျွန်မက ဂြိုလ်ကောင်လေးအဖြစ်နဲ့ ရောက်လာတာလား မပြောတတ်ပါဘူ။ ဒယ်ဒီနဲ့ ရပြီးကတည်းက ခြောက်နှစ်လုံးလုံး သာယာစိုပြည်နေခဲ့တာ ကျွန်မကို မွေးလာပြီး လေးလ လည်းရရော၊ ဒယ်ဒီ အိန္ဒိယပြည် ပူနားကို ပြောင်းမိန့်ကျပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ မြန်မာရော၊ အိန္ဒိယ ပါ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အတူရှိခဲ့တာကိုး။ ဖြစ်ပုံက လည်း ဒယ်ဒီက မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတော့ တစ်ညနေ ကလပ်မှာ အရာရှိတွေစုကြရင်း အထက်အရာ ရှိနဲ့ စကားများကြတယ်တဲ့။ ဒယ်ဒီက ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ လက်သီး နဲ့ ဆွဲထိုးတော့ ချက်ချင်း အဲဒီအပြစ်ကြောင့် ပူနားကို ပြောင်းမိန့်ထွက်လာတာပဲတဲ့လေ။
ပြဿနာ ကို ပိုပြီးကြီးထွားစေတာက ကျွန်မရဲ့ ဘွားမေက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကုလားပြည်ကို သူ့မြေး နဲ့မြစ် လိုက်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူး ဖြစ်ပေါလေရော။ အဲဒီမှာ မာမီ့ခမျာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်၊ ယောက်ျား ကိုလည်းမခွဲနိုင်၊ မိဘမရှိ လို့ တစ်သက်လုံး စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ အဘွားရဲ့ အမိန့်ကိုလည်း မလွန် ဆန်ရဲရှာဘူး။ ဒယ်ဒီကလည်း သူ့ဇနီး နဲ့ သမီးကို ထားခဲ့ရမှာကို မကျေနပ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒယ်ဒီ တစ်ယောက်တည်းပဲ ပူနားကို ထွက်သွားဖြစ် ပါတော့တယ်။
အခုချိန်မှာ သိပ္ပံပညာတွေ ထွန်းကားလာတာ ကမ္ဘာကြီးကို ချုံ့နိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ချင် ရင် ဖုန်းကလေး ကောက်ကိုင်လိုက်ရုံနဲ့လည်း စကားပြောလို့ရ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ချင်သေးသပ ဆိုရင် လည်း လေယာဉ်ပေး တက်လိုက်သွား၊ နာရီပိုင်းအတွင်းလိုရာ ခရီးကို ရောက်၊ စာတွေပေတွေ ရေးချင်ရင် E-mailနဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ တင်လိုက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သက်ဆိုင်ရာကို ရောက်သွားပြီမို့၊ အကျိုးအကြောင်း ကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သိရပြီးပြီလေ။ ကျွန်မကို မွေးခါစ ၁၉၂၄ခုနှစ်ဝန်းကျင် ဟိုဘက်ခေတ်ကတော့ ဘယ် ဒီလိုဟုတ်ပါ့မလဲ။ မာမီတို့ ဒယ်ဒီနဲ့ အင်္ဂလိန်ပြည်ကို အလည်လိုက်သွားတုန်းက သင်္ဘောနဲ့ တစ်လ ကိုးသီတင်းကြာအောင် စီးခဲ့ရတာ တဲ့။ ဒီတော့လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားကို အဘွားလုပ်တဲ့သူက မထည့်ချင်တာကို ကျွန်မ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
အဘွားရဲ့ စကားကို နားထောင်ပြီး မာမီက လတ်တလော မလိုက်နိုင်သေးဘူး ဆိုတော့ဒယ်ဒီက အလုပ် က ပေးထားတဲ့ အိမ်ကနေပြီး သူ့မိတ်ဆွေရင်းတစ်ဦးရဲ့ ဘေးနားကအိမ်ကို ငှားပြီး ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအိမ် က ရန်မျိုးလုံရပ်ကွက်မှာ ရှိတဲ့အခု ဗထူးဘောလုံးကွင်းထိပ်က နှစ်ထပ်ဗိုလ်အိမ်ကြီးပါပဲ။ သူ့မိတ်ဆွေ ဇနီးမောင်နှံ ကိုလည်း ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အပ်နှံထားခဲ့သေးတယ်တဲ့လေ။
ကျွန်မ ကို ထိန်းတဲ့ နာနီက ကုလားလူမျိုး၊ နာမည်က နာဒီပါတဲ့။ နေတာကဘောလုံး ကွင်းရဲ့ထိပ်မှာ ရှိတော့ ညနေတိုင် ဘောလုံး ကစားကြပြီဆိုရင် နာဒီးက သူ့ကိုယ်သူလည်း ရှိုးတွေပြင်၊ ကျွန်မကို လည်း အကျအန ဆင်ပြီး ဘောလုံးကွင်းထဲ ခေါ်သွားကလေးထိန်းတာပါ။ အဲဒါရဲ့ရလဒ်ကတော့ တွေ့တွေ့သမျှ လမ်းပေါ် က ကျောက်ခဲမှန်သမျှကို "ဂိုး"ဆိုပြီး ခြေထောက်နဲ့ လိုက်ကန်တတ်တာပဲ တဲ့လေ။ ဂိုးအသွင်းကောင်းလို့ ၀ယ်ပေး သမျှ ရှူးဖိနပ်တွေ ကြာကြာမခံဘဲ ထိပ်ကွဲ ထိပ်ပေါက်တွေ ဖြစ်လို့ မာမီရဲ့အဆော်ကို ခဏခဏ ခံရလည်း မမှတ်ပါဘူး။ အကျင့်ကပါနေတော့ ခုအသက်အရွယ် ထိပါးစပ်ကသာ "ဂိုး"လို့ မပြောရဲလို့ မပြောတော့ပေမဲ့ ခဲလုံးတွေ့ရင် ခြေထောက်က အမှတ်မထင် နဲ့ ကန်လိုက်ချင်မိသေးတာပါပဲနော်။
နာဒီကလည်း တော်တော်ခြေရှည်ပါတယ်။ တစ်ခါကျတော့ ကျွန်မကို လက်ဆွဲပြီးနန်းတော်ရှိရာ ကျုံးဘက်ကို လမ်းလျှောက် ထွက်လာတာတဲ့။ ကျုံးရေပြင်မှာ ပွင့်နေတဲ့ ကြာပန်းတွေတွေ့တာနဲ့ ၀ါကျတစ်စုံ လုံးတောင် ပြည့်စုံအောင် မပြောတတ်သေးတဲ့ ကျွန်မက "လှလှ" "လှလှ"ဆိုပြီး နာဒီ လက်က ရုန်းထွက်ပြီး ကျုံးထဲ ပြး ဆင်း လိုက်တာ လိုက်ဆွဲလို့ မမီလိုက်တာနဲ့ ရေနစ်ပါလေရော။ အနီးအနားက လူတွေ ၀ိုင်းဆယ်ကြလို့ အသက်မသေခဲ့တာတဲ့လေ။ စကားတောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပြောတတ်သေးတဲ့ မတ်တတ်ပြေး အရွယ်ကတည်းက အလှအပ ကြိုက်တာကတော့ လွန်းလွန်း လှချည့်ရဲ့လို့ မာမီ ပြောပြတဲ့ ငယ်ဘ၀ကို နားထောင် ရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြစ်ဆို ရှုတ်ချလိုက်မိ ပါသေးတယ်။
အဲလို အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရတဲ့သတင်းကို ကြားတော့ ဘွားမေက ထဘီကို ခါးတောင်းမကျိုက်ရရုံ တစ်မည်နဲ့ မာမီဆီ လိုက်လာပါရောတဲ့။ ကလေးကို နာနီနဲ့ ယုံကြည်စွာ ပစ်ထားရကောင်းလားနဲ့ ဒေါသတွေထွက်၊ ဆူဆူပူပူတွေ လုပ်ပြီး ရန်မျိုးလုံအိမ်မှာ ခွဲမနေရဘူး။ သူ့မျက်စိအောက် ပြန်လာ နေရမယ်လို့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ချလိုက်တာ နဲ့ ကျွန်မတို့အားလုံးဘွားမေရဲ့ ခြံထဲကို ပြောင်း လာကြပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အသက် က နှစ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမှာပါ။
ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘိုးလေးရဲ့ လက်ပေါ်မှာ ကြီးတယ်လို့ ပြောနိုင်လောက်ပါတယ်။ ဘိုးလေးတို့ မှာကလည်း သားသမီး မထွန်းကားဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျွန်မကအိမ်နှစ်အိမ်ရဲ့ ဆည်း လည်းလေး ဖြစ်နေတော့ တာပေါ့။ ဘွားမေရဲ့ အိမ်မှာကလည်း အဲဒီအချိန်က အလွန်စည်ပင်ပါ တယ်။ အတောင်မစုံသေး လို့ သိုက်မြုံက မခွာကြသေးတဲ့ တူတွေ၊ တူမတွေ၊ မြေးတွေ၊ မြစ်တွေနဲ့ တသိုင်းတ၀ိုင်းပါပဲ။
မေသဂီရပ်မှာရှိတဲ့ ဘွားမေရဲ့အိမ်ကို ကျွန်မတို့ ပြောင်းနေကြပြီးဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြားတော့ ဒယ်ဒီက တစ်ခါ မကျေနပ်ပြန် ဘူး။ ကျွန်မတို့ကို ပူနားလိုက်ခဲ့ဖို့ ပြန်လာခေါ်ပါတယ်။ ဘွားမေနဲ့ အကျောက်အကန် ငြင်းကြ ခုံကြတယ် ဆိုပဲ။ ဒီတော့ ဘွားမက တစ်ဝက်အလျှော့ပေးလိုက်ပြီး မာမီ တော့ခဏလိုက်ချင်လိုက်သွား။ ကျွန်မ ကိုတော့ သိပ်ငယ်သေးတာမို့ ခုမထည့်နိုင်သေးဘူး။ ကျောင်းသွားတဲ့ အရွယ်ကျ မှ ခေါ်ပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒယ်ဒီကလည်း ဘွားမေကို မိခင်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတာနဲ့ စကားနားထောင်ပြီး မာမီ့ကိုပဲ အတူခေါ်သွားပြီး ပြန်သွားတယ်တဲ့။ ပူနားမှာမာမီ လုံးဝမပျော်ပါဘူး။ သမီးကို ထားခဲ့ရလို့ လွမ်းတာ ကလည်းတစ်ကြောင်း၊ တစ်ပါးနိုင်ငံမှာ ဆွေမရှိ မျိုးမရှိ၊ မိတ်ဆွေငယ်ပေါင်းမရှိနဲ့ အားငယ်တာ လည်းပါတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကြာကြာမနေနိုင်ဘဲ သုံးလေးလ နေပြီးပြန်လာပါတယ်။ အဖေကို ဒီတစ်ခါ ပဲပြန်တွေ့လိုက်ရတာအပြင် ငယ် ကလည်း ငယ်သေးတာမို့ ဒယ်ဒီရဲ့ပုံရိပ်ကို ကျွန်မ လုံးဝမမှတ်မိပါ ဘူး။
ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ အခုထိ မှတ်မိနေတဲ့သူ တစ်ဦးတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒီသူကို ကျွန်မကအဖေလို့ ထင်နေ မိတာ။ ခေါ်တော့လည်း "ပါပါ"တဲ့လေ။
ကျွန်မ အမေ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ အဖေအသစ်ရတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ မာမီက သူ့ယောက်ျား ကို ချစ်မြတ်နိုးလိုက်တာမှ ဒယ်ဒီနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ပစ္စည်းတွေကိုတောင် အမြတ်တနိုးနဲ့ အရိပ်ကြည့်နေတဲ့ သူပါ။ ဒယ်ဒီပူနားက ရေးသမျှစာတွေကို အားလုံးစုထားပြီး My Loveလို့ ပုတီးစေ့တွေနဲ့ စာလုံးဖော်ထားတဲ့ ကတ္တီပါအိတ်ထဲမှာ တရိုတသေ သိမ်းထားတာ ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ ထုတ်ပြလို့ ဖတ်ရဖူးပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ စိတ်မှာ သူတစ်ပါးကို အဖေလို့ ပုံရိပ်ထင်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းကလည်း ရှိတာကိုး။ အဲဒီ ကျွန်မ "ပါပါ"လို့ ခေါ်ပြီး သူလာတိုင်း ပြေးကြိုတဲ့သူက "စာပို့လုလင်" ကုလားအဘိုးကြီး တစ်ယောက်ပါပဲ။ ဟိုခေတ်က စာပို့လုလင် က စက်ဘီးနဲ့ လာပါတယ်။ ၀တ်ထားတာကလည်း သားသားနားနား ခံ့ခံ့ညားညားပါ။ ကာကီရောင် ဘောင်းဘီတိုပေါ်မှာ ဘွတ်ရှပ်လို့ခေါ်တဲ့ အပေါ်က ကာကီအင်္ကျီ ခပ်ရှည်ရှည်ဝတ်ထားပြီး စလွယ် က အနီးရောင်နဲ့ အလယ်မှာ ကြေးပြားဝိုင်းတစ်ခု လည်းပါလိုက်သေးတယ်။ အဘိုးကြီး ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး နှစ်စ ကလည်း ကော့ထောင်နေတာပဲ။
ခြံပေါက်ဝ မှာ စက်ဘီးဘဲလ်သံ ပေးလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မကြားရာ နေရာကနေ ခုန်ပေါက်ပြီး ပြေးကြို တာပါပဲ။ အဘိုးကြီးကလည်း "ဘေဘီ"ဆိုပြီး ကျွန်မကို ကောက်ချီလိုက်သေးတယ်။ သူလာတိုင်း ကျွန်မအတွက် စားစရာ၊ အရုပ်တွေ၊ ဂါဝန်လှလှလေးတွေ၊ ဖိနပ်တွေ၊ ဦးထုပ်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ပါလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပါဆယ်ထုပ်တွေက ပူနားကနေပြီး ဒယ်ဒီက တစ်ချိန်လုံး ပို့ပေးနေတာ မဟုတ်လား။
ပို့ပေးသူကို ကျွန်မက ငယ်သေးလို့ ဘယ်သိနိုင်မှာလဲ။ ယူလာပေးတဲ့သူကပဲ ပေးတယ်လို့ ထင်မိ တာပေါ့။ ဒါကြောင့် လည်း အဖေလို့ ထင်ပြီး "ပါပါ"လို့ ခေါ်တာနေမှာပါ။ ဒယ်ဒီက သူနဲ့အတူမနေ ရတဲ့ သမီးမို့ သနားလည်း သနား၊ အကြင်နာလည်းပိုပြီး လိုအပ်တာထက် ပိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ အပတ်တိုင်းလို ရောက်နေတဲ့ ပါဆယ်ထုပ်တွေ က ကျွန်မ သုံးမကုန်နိုင်အောင်များပါတယ်။ ချော့ ကလက်တွေ၊ သကြားလုံးတွေ၊ စကားစရာ ဆိုတာ လည်း အမျိုးစုံပါပဲ။ ဆောင်းတွင်းအခါကျရင် နွေးနွေးထွေးထွေး ၀တ်ဖို့ သိုးမွေးဝတ်စုံတွေ၊ ယုန်ရုပ်ပုံစံနဲ့ သိုးမွေး ဖိနပ်လေးတွေက အစသေသေ ချာချာကရိကထခံ ရွေးဝယ်ပြီး ပို့နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ကြီးမား သောမေတ္တာကို ကျွန်မအဝေးကနေ ထိတွေ့ခံစားရခြင်း အဖြစ်ပါပဲ။
အဲဒီမေတ္တာ ကို ကျွန်မကြာကြာခံစားခွင့်မရလိုက်ပါဘူး။ လေးလသမီးက ရှင်ကွဲကွဲသွားတဲ့ အဖေ နဲ့ လေးနှစ်သမီးမှာ သေကွဲကွဲရတဲ့ အဖြစ်ကို ကြုံရတော့တာပါပဲ။ ရုတ်တရက်ဒယ်ဒီ ဆုံးပြီဆို တဲ့ ကြေးနန်းကိုရတော့ ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်ကြဘူးပေါ့။ ဒယ်ဒီကနမိုးနီးယား အဆုတ်အအေးမိတဲ့ရောဂါ နဲ့ဆေးရုံ မှာ ကွယ်လွန်သွားခြင်းပါ။ မာမီက လိုက်သွားချင်ပေမဲ့ အသုဘကလည်း မမီနိုင်။ ဘွားမေ ကလည်းပေးမလွှတ်တာနဲ့ ပူနားကို လိုက်မသွာဖြစ်ပါဘူး။ ဒယ်ဒီရဲ့ဘတ်တလာကပဲ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့် မာမီ့ ရဲ့ ဘ၀ထဲကို ကျွန်မက ဂြိုလ်ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ ရောက်လာသလားလို့ တွေး ကြည့်မိတာပါ။ မာမီ မုဆိုးမဖြစ်တော့ အသက်သုံးဆယ်တောင် မပြည့်သေးပါဘူး။ ကျွန်မမှာ အဖေ မရှိတော့တာကလွဲပြီး အခြေအနေ ဘာမှ မပျက်သွားပါဘူး။ ဘွားမေရဲ့အိမ်မှာ တသိုက်တ၀န်း စည်းစည်ပင်ပင် ရှိမြဲပါပဲ။
ဘိုးလေးအောင်ညွန့်က ကျွန်မကကို အလွန်ချစ်ပါတယ်။ မနက် အိပ်ရာက ထတာနဲ့ မာမီကည ၀တ်အင်္ကျီချွတ်၊ ကိုယ်လက် သန့်စင်ပေးပြီး အ၀တ်သစ်လဲပြီးတာနဲ့ ဘိုးလေးအိမ် ရောက်သွားတာ ပဲလေ။ ကျွန်မ ရောက်မလာမချင်း ဘိုးလေးက နံနက်စာမစားဘဲစောင့်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါ တလေ ကျွန်မ နောက်ကျနေရင်....
"မလာသေး ဘူးလားဟေ့။ ပဲပြုတ်တွေ အေးကုန်ပြီ၊ နံပြားတွေ အေးကုန်ပြီ"နဲ့ လှမ်းအော်ခေါ်တော့ တာပါပဲ။ ညနေစာ လည်း ကျွန်မဘိုးလေးနဲ့အတူ စားဖြစ်တာများပါတယ်။ ဘိုးလေးကျောင်းဆင်း ချိန် ရောက်ခါနီးပြီဆိုရင် ဘွားလေး အိမ်ပေါက်ဝ ကနေ ဘိုးလေးကျောင်းပြန်အလာကို ထွက်မျှော် စောင့်ရတာလည်း အမောလေ။ ဘိုးလေးက ကျွန်မ ကို တွေ့တာနဲ့ ကောက်ချီပြီး "ဒီနေ့ ဘာတွေ လုပ်လဲ" ဘာညာနဲ့ စပ်စုတယ်ပေါ့။
ကျွန်မကလည်း အေးအေးမနေဘူး။ ကုန်းလည်း တိုက်တတ်သေးတယ်။ နေ့လယ် နေ့ခင်းဘွားမေ တို့၊ ဘွားလေးတို့၊ မာမီတို့စကားဝိုင်းမှာ ဘိုးလေးအကြောင်း မကောင်း ပြောနေကြတာ ကြားရင် မှတ်ထားပြီး ဘိုးလေးပြန် လာတော့ တစ်လုံးမကျန် အကုန်ပြန်ပြောပြတာပေါ့။ ဒါဆိုညနေကျ ဘိုးလေးတို့ လင်မယား စကားတွေများကြ၊ သတ်ကြပါလေရော။ ဘိုးလေးက "ဒီအိမ်မှာ မနေ တော့ဘူး၊ ဆင်းမယ်"ဆိုပြီး အိပ်ရာတွေ လိပ်၊ သေတ္တာတွေပြင်နဲ့ သွားမယ်လုပ်တာတွေ့တာနဲ့ ဘာရမလဲ၊ ကျွန်မက အဲဒီသေတ္တာပေါ် ပြေးမှောက်ပြီး "ဘိုးလေး မသွားရဘူး"နဲ့ အော်အော်ငိုတာ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ကြားလောက်ပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်တာနဲ့ ဘိုးလေး လည်း အိမ်ပေါ်က မဆင်းဖြစ် တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ဆို ကျွန်မရဲ့ရှေ့မှာ ဘိုးလေးအကြောင်း ဘယ်သူမှ မပြောရဲကြတော့ဘူး လေ။ ဘိုးလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်သားတွေက ကျွန်မကို အော့ကြောလန် သွားကြ မှာ သေချာပါ ရဲ့။
ကျွန်မကို ဦးဆုံး စာသင်ပေးတဲ့သူက ဘိုးလေးမဟုတ်ဘူး။ ဘွားလေးပါ။ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ၀လုံးကို စရေးခိုင်းပြီး ပစောက်ဖြစ်အောင် အပေါ်က အပေါက်ဖောက်လိုက်၊ ဂငယ်ဖြစ်အောင် အောက်က အပေါက်ဖောက် လိုက်၊ ငဖြစ်အောင် ဘေးက အပေါက်ဖောက်လိုက်နဲ့ အဲလိုမျိုး ကစားတဲ့အနေနဲ့ စပြီး သင်ပေးရင်း နဲ့ သင်ပုန်းကြီး ကုန်သွားတာလို့ ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်မ ငါးနှစ်သမီး ရောက်တော့ အိမ်မှာသင်ပေးထားပြီး ဖြစ်လို့ စာက ဖတ်တတ်နေပါပြီ။ ဘိုးလေး နဲ့ကျောင်း စလိုက်ရမယ် ဆိုတော့ ကျွန်မမှာ ပျော်လိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ခြင်းလေ။ ဘိုးလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ကော့ခနဲ လိုက်သွား တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းစပြီးတက်တဲ့နေမှာပဲ ပြဿနာ အကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
ကျွန်မ ကို မူလတန်းက ဆရာမဒေါ်ရှုရဲ့ အတန်းမှာ အပ်ထားခဲ့ပြီး နေ့လယ်မုန့်စားဆင်းတဲ့အခါကျ လာခေါ်မယ် လို့ ဘိုးလေးက ပြောသွားတာနဲ့ မုန့်စားဆင်းချိန်ရောက်တော့ ကျွန်မ ဘိုးလေးကို မျှော်တယ်ပေါ့။ တခြားကလေးတွေက အမေတွေ လာခေါ်တာနဲ့၊ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ အစ်ကို အစ်မ ကြီးတွေနဲ့ အတူပါသွားကြတာနဲ့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘဲ ကျွန်မနဲ့ ဆရာမနှစ်ယောက်တည်း ကျန် ခဲ့တော့တယ်။ ဒါနဲ့.....
"ဘိုးလေးရော" လို့ သွားမေးပါတယ်။
"သမီး ဘိုးလေး မရှိဘူး၊ ကုလားမကြီးနောက် ထည့်လိုက်ပြီ"တဲ့။
Posted by SHWE ZIN U at 10:40 AM
သိပ် ကြိုက် တဲ့ ဆောင်းပါးပါ ..ဆက်တင်ပေးပါဦးနော် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ
Khin Oo May ပတ္တမြားခင် .မေတ္တာဦး နဲ့ ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရေးတဲ့စာ . အခု မရေးတော့ဘူး. သြစတလျှ က ကောင်မလေးစာ ( အဲဒီစာတွေ ရဲ့လွမ်းမိုးမှဟာ တို့စာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပါဘဲ အားကျမှူတွေ ပါတယ်။ သဘောကျမှူတွေ ပါတယ် သူတို့အကြောင်းတွေ စိတ်ဝင်စားတယ် သူတို့လှူပ်ရှားတာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ် သူတို့သွားတာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ် သူတို့ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။)
Khin Oo May သော်တာဆွေ ရွေဥဒေါင်း.
ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်.Magazine မှာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖတ်နေရတာ